Iinethiwekhi zokuncokola -IiCreativos ezikwi-Intanethi | I-Creativos ezikwi-Intanethi (Iphepha 2)
Siza kufumanisa ukuba isichazi se-SEO sithetha ntoni “Usetyenziso lweeNjini zokuKhangela.” Kukuma kwezinto eziphilayo, oko kukuthi, asiyibhataleli.
IPinterest ifikelela kwizigidi ezingama-250 zabasebenzisi abasebenzayo ngenyanga
Imifanekiso yenethiwekhi yoluntu uPinterest isandula ukubhengeza ukuba ifikelele kwizigidi ezingama-250 zabasebenzisi abasebenzayo ngenyanga.
Ngaba uyafuna ukwandisa ikharityhulam yakho? Sikufundisa ukuba usebenzise i-Instagram njengoncedisayo kwipotifoliyo yakho. Bonisa umsebenzi wakho kwihlabathi!
I-Instagram igqiba ekubeni ingene kuzo zonke iindawo zentengiso ezikhoyo kuyo, eyakutshanje ngumabonakude wayo, kodwa yintoni uyilo lwe-instagram?
UFacebook uxolisa kubantu abangaphezu kwezigidi ezingama-50 abachaphazelekayo ngenxa yokuvuza kunye neCambridge Analytic kunye nokophula iiprofayili zabo. Yiyo loo nto uzama ngokuchasene nemfihlo yabantu ababeke ithemba labo ngokugcina idatha yakho kwindawo yakho.
I-Instagram ityhila ixesha lakho lonxibelelwano kwaye ilumkisa ngesikrini
I-Instagram yazise izinto ezimbini ezintsha kutshanje. Akukho namnye kubo owandisa imfihlo yakho, endaweni yoko iyanciphisa. Ngoku abantu oqhelene nabo banokubona uqhagamshelo lwakho kwaye uza kubona ukuba umntu othile uthimba iscreen sakho.
Inethiwekhi entsha yentlalo ibizwa ngokuba yiVERO kwaye wonke umntu uthetha ngayo.
Inethiwekhi yentlalo yoluntu ilapha ukuze uhlale. Banqumle imodeli yokuthengisa idatha yesiko okanye basebenzise intengiso, ubuncinci okomzuzwana.
Ukuba into oyithandayo uyilo lwegraphic kwaye ufuna ukwazi ukuba ungafikelela njani kubaphulaphuli okanye kubathengi bexesha elizayo, sicebisa ukuba wenze ijelo kwiYouTube.
I-Wix ithatha ubugcisa nge-36 yezigidi zeedola nge-DevianArt, elona qonga lindala lomzobi lifunyenwe yinkampani ye-Wix
Inethiwekhi yentlalo yePinterest sisixhobo esifanelekileyo kubo bonke abadali, inika izingqinisiso kwinjini yokukhangela enkulu kunye nokulungiselela wonke umsebenzi wakho.
Ukuphendula kwe-Facebook kunye nesimboli yentliziyo eyaziwayo
I-Facebook ayiyeki ukwenza izinto ezintsha kunye nezinto zamva nje ezisizisele zona ziMpendulo ze-Facebook, apho i-icon yentliziyo iyeyona isetyenziswa kakhulu namhlanje.
Uyifumana njani imali yeefoto zakho
Uyifumana njani imali ngeefoto zakho kulula xa usebenzisa imifanekiso yeAgora, iqonga leselula apho ungathengisa khona ngokulula iifoto zakho.
I-Twitter ayisayi kubala imifanekiso, iividiyo nokunye okuninzi, ngoonobumba abali-140
Olu lolona tshintsho lukhulu ku-Twitter kwinkonzo yalo ukusukela oko yaqalwa. I-Twitter ngolwe-Lwesibini ibhengeze ukubulawa kotshintsho olujolise ekuzisuseni kubaphikisi abali-140 ngomthetho we-tweet.
Ukuba ujonga indawo yokukhuthaza indalo yakho okanye ubugcisa, mhlawumbi uGoogle + uyile ulungile. UGoogle ujonga zonke iintlobo zabadali.
Ubume beshishini kwiwebhu: I-ABC yohlobo lwe3.0
Kule nqaku sinikezela ngeengcebiso ezine ezisisiseko ezinokuthi zifundwe ngabo nabaphi na oqeqeshiweyo ebaleni. Qhubeka ufunda!
Ukukhangela i-icon yemidiya yoluntu efanelekileyo
Ukudityaniswa kweepakethe zemithombo yeendaba zentlalo, ukusuka kwiklasikhi ukuya kwizitayile ezintsonkothileyo. Ukuguquguquka ukugubungela elona nani liphezulu lezitayile
Iinethiwekhi zentlalo: Ukuvela kuyilo lweelogo zakho
Ukuvela kwelogo yeenethiwekhi ezinkulu zanamhlanje, ukubonakaliswa koyilo olucwangcisiweyo kunye nobuncinci njengotyekelo ngo-2014.
Iimpawu zonxibelelwano zentlalo ziluncedo kuba kwiiwebhusayithi zethu kuyacetyiswa ukuba ukufikelela kufacebook kwiphepha lesiza
Ipakethi yeMpawu zeMinimalist 'iMetro yeendaba zeMidiya yoLuntu'
Ipakethi yeminimalist icon eneelogo zezona ndawo zidumileyo zonxibelelwano lwangoku. Inezisombululo ezingama-32 kunye nama-64 ee-pixels
Ipakethe yee-Icons ezingama-60 zeMithombo yeendaba
Abanye benu bahlala bendibuza ngeempawu ezingakumbi kwinethiwekhi yoluntu ngenxa yokuba zisetyenziswa kangakanani kwaye ziza njani, ...
Iimpawu zeendaba zentlalo ezili-18 ezimnyama namhlophe
Iimpawu zemithombo yeendaba zentlalo ziza ziluncedo xa kuziwa ekukhuthazeni iiprofayili zethu kwezo nethiwekhi kubakhenkethi bebhlog yethu, iwebhusayithi okanye ipotifoliyo.
Iimpawu zeendaba zentlalo ezikumgangatho ophezulu ze-3D
Xa ndizibonile ezi icon zonxibelelwano lwasentlalweni kwi-3D ndiye ndanomdla ku-0_o (hehe) ngomgangatho wazo kwaye ...